May 2015 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, May 31, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidRoot, AndroidSamsung, SamsungRoot No comments
Crdedit to :www.pyaephyo.com မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
မြန်မာစာ မြန်မာဖောက် ပြုပြင်ချင်သူများအတွက် by ဝင်းကမ္ဘာကျော်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, May 31, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidMyanmarFont No comments
မြန်စာစာ ပြဿနာတွေအတွက် အခက်အခဲ
တချို့ဖုန်းတွေက root မဖောက်ပဲ
root ဖောက်ပြီးတော့လည်း မြန်မာစာ
ဖြစ်နေလို့ ဘယ်ဖုန်းက ဘာနဲ့
ဖောက်လိုက်ပါ ဘယ်software သုံးလိုက်ပါ
G730 ကို root ဖောက်ချင်ရင်တော့
Credit to ဝင်းကမ္ဘာကျော်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
ထမနဲ by TTSweet
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, May 31, 2015 snack No comments
ဟိုနေ့က ဆွိတို့အိမ်မှာ ထမနဲထိုးစားကြတယ်။ အိမ်မှာထိုးတာဆိုတော့သိပ်ကြီးကြေနေအောင်တော့ မထိုးနိူင်ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ အစိမ်းမထိုးပဲ ချက်ပြီးမှထိုးတော့ လူသက်သာပါတယ်။
ကောက်ညှင်း ဆန်ခြင်ခွက်(Rice Cooker နဲ့တွဲပါတဲ့ ပလတ်စတစ်ခွက်) ၅လုံးလောက်ကို ရေ ၆ခွက်ခွဲလောက်ထည့်ပြီး Rice Cooker နဲ့ချက်ထားပါ။
ဈေးကနေ အုန်းသီး ခြစ်ညှစ်ဆိုင်က အုန်းသီး အခွံနွှာပြီးသား အဆင်သင့် တစ်လုံးဝယ်ပါတယ်။ စလုံးမှာတော့ ဈေးမကြီးပါဘူး။ တစ်လုံးလုံးမှ ၁ကျပ်ခွဲရယ်။
မြေပဲဆန် ဆန်ခြင်ခွက် ၁လုံးလောက်ကို ဆားနဲ့လှော်ပြီး အခွံချွတ်ထားပါ။ ထပ်ခြမ်းကွဲလေးတွေဖြစ်အောင် လက်သုတ်ပုဝါလေးနဲ့ထုတ်ပြီး ထုပေးရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
(ဆွိကတော့ အလွယ်ပဲကြော်လိုက်တယ်။ ကြော်လိုက်တော့ မြေပဲခွံကဆီနဲ့ကပ်နေတော့ ချွတ်ရခက်တယ်လေ ...)
နှမ်းလှော်ပြီးသား အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် အမဲရောင် ဆန်ခြင်ဘူးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ။
ဂျင်းလက်မအရွယ် ၅ခုလောက်ကို အခွံနွှာပြီး ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ။
ဆား သင့်သလို အပေါ့အငံစိတ်ကြိုက်မြည်း ထည့်ပါ
ဆီ စားပွဲဇွန်း ၁၀ဇွန်းလောက်။
Non Sticker ဒယ်အိုး ကြီးကြီးမှာ ဆီထည့် မီးအနေတော်လောက်ထားပြီး ဆီကျက်ရင် အုန်းသီးဆန်လှီးထားတာတွေ ထည့်ကြော်ပါ။ အုန်းသီးရွှေဝါရောင်လေး သန်းလာရင် ဆီစစ်ပြီး ကော်ထားပါ။(အုန်းသီးကျက်အောင်ကြော်ရပါမယ် ... မဟုတ်ရင် အုန်းသီးကချဉ်ပြီး ထမနဲက အထားမခံပါဘူး )
အပေါ်ကဆီအိုးထဲကို ဂျင်းလှီးထားတာထည့်ပြီး ဂျင်းနံ့မွှေးလာတဲ့အထိ ကြော်ပေးပါ။ ပြီးရင်ကောက်ညှင်းချက်ထားတာထည့်၊ အုန်းနို့ထည့်ပြီး ကောက်ညှင်းတွေ ကြေအောင်၅မိနစ်လောက် မွှေပေးပါ။
ကောက်ညှင်းစိတ်ကြိုက် ကြေပြီ၊ အုန်းနို့လဲပျောက်ပြီဆို ခုနကကြော်ထားတဲ့ အုန်းသီးကြော်၊မြေပဲဆံ၊ နှမ်း၊ ဆား ထည့်ပြီး နှံ့နေအောင် ၁၀မိနစ်လောက်မွှေပေးပါ။ ဆီလိုရင် ဆီစိမ်းထပ်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
ဆားအပေါ့အငံမြည်း ပြီး ချလို့ရပါပြီ။ ဂျင်းနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ထမနဲ ... စားကြပါဦး။
TTSweet Blogမှ ကူးယူဖော်ပြသည်
ကြက်သား ငရုပ်အချိုကြော် by TTSweet
တို့ဟူး ကျိုနည်း by TTSweet
ဒီနေ. တီဆွိတို.အိမ်မှာ တို.ဟူးသုတ်စားတယ် ... ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ သရေကျရအောင် အဲလေ ယောင်လို. အိမ်မှာသုတ်စားလိုရအောင် တို.ဟူးဘယ်လိုကျိုလဲ သုတ်လဲ ပြောပြမယ်နော် ...
တို့ဟူးသုပ် ချဉ်ငံစပ် by TTSweet
၁ တို့ဟူး ပါးပါးလှီးထား
၂ ဂေါ်ဖီ တစ်စိတ် ရိတ်ရိတ်လေးလှီးထား
၃ ကြက်သွန်ဥကြီးကြီး ပါးပါးလေးလှီးထား
၄ နံနံပင် ရိတ်ရိတ်လေးလှီးထား
၅ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် (ဆနွန်းမှုန်.လေးနဲ.ချက်ပါ)
၉ ပဲငံပြာရည် အကြည်ရည်
၁၀ ပဲငံပြာရည် အနောက်ရည်
၁၁ ငရုပ်သီးအရောင်တင်မှုန့်ကို ဆီနဲ့ချက်ထားတဲ့ဆီနီ (အရောင်လှအောင်)
၁၂ တို့ဟူးကြော်ပြီး ကတ်ကြေးနဲ့ပါးပါးညှပ်ထား
နံပတ် ၁ ကနေ ၁၁ ထိသင့်သလိုထည်.ပြီး အားလုံရော ဖွဖွလေးနယ်ပါ ...
ပြီးရင်အပေါ်ကနေ နံပတ်၁၂ ကိုဖြူးထည့်ပါ ...
ကဲတို့ဟူးသုပ် ချဉ်ငံစပ်လေး စားလို့ရပါပြီ ...ရေနွေးကြမ်း ပူပူလေးလဲသောက်ပါအုံး။
တို့ဟူးတွေကို လက်တစ်လုံးလောက်စီ အထူရအောင်လှီးပါ။ အလယ်သားတွေပါ ကြွတ်အောင် ဓားနဲ့ အလယ်မှာ ၂ကြောင်းလောက်ခွဲပြီါ် ကြော်ပါ။ အရမ်းကြွတ်သွားရင်လဲမကောင်းပါ။ အထဲက ပျော့ပျော့လေးနဲ့ အပြင်က ကြွတ်ရင် ချပြီး အချဉ်ရေလေးနဲ့စားလို့ရပါပြီ။
ကြက်သွန်ဖြူ ၂မွှာလောက်နဲ့ ဂျင်းပါးပါး တစ်ခုကို ညက်နေအောင်ထောင်းပါ။ မန်ကျည်းမှည့်ရေ ထဲကို ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်၊ သကြားနဲနဲ၊ Sin Sin extra hot ငရုပ်ဆီ ဇွန်းဝက်ခန့်၊ နံနံပင် ရိတ်ရိတ်လှီး၊ ဂေါ်ဖီလှီးထည့်မွှေပေးပါ။ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုပ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးထည့်ပါ။ အချဉ်ရေ စပ်စပ်မွှေးမွှေး ရပါပြီ။
၀က်ချဉ်စပ် by TTSweet
၀က်သားချဉ်စပ်လေး ဒီနေ့ချက်စားဖြစ်တယ်။ မဆွိတီရဲ့ချက်နည်းလေး ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
၀က်သား၄၀၀ ဂရမ်လောက်ကို အသားချည်းဝယ် ရေခဲသေတ္တာထဲကထုတ်ပြီး လှီးကောင်းရုံအနေတော်လေးမှာ ပါးပါးလွှာလွှာလေးတွေ လှီးထားပါ။ ခဲနေတုံးမှာ လှီးမှ ပိုကောင်းပါတယ်။ သုံးထပ်သားကြိုက်ရင်လဲ သုံးထပ်သားကို ပါးပါးလှီးချက်နိူင်ပါတာယ်။ ပြီးရင် ၀က်သားကို ထုံးစံအတိုင်း ပဲငံပြာရည်အချိုရည်၊ ဆား၊သကြား၊ အချိုမှူန့်၊ ငရုပ်ကောင်း နဲ့နယ်ထားပါ။ ချက်ခါနီးမှ ပြောင်းဖူးမှုန့် (Corn Flour) လေး တစ်ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီး နယ်ပေးပါ။
ကြက်သွန်နီ ဥအလတ် ၂လုံးလောက်ကကို ၈စိတ်စိတ်ြပီး အလွှာလေးတွေ ခွါထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ၃-၄မွှာလောက်ကို Chop လုပ်ထားပါ။
ဂျင်း တစ်လက်မအရွယ် ၂ခုလောက်ကို ပါးပါးလေးတွေ လှီးထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၅မွှာလောက်နဲ့ ငရုပ်သီးစိမ်း၃-၄တောင့် (မရှိရင်) ငရုပ်သီးခြောက် ၅တောင့် ၆တောင့်လောက်ကို အတူရောကြိတ်ထားပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးလေးတစ်လုံးလောက် လှီးထားပါ။ မရှိရင် Tomato sauce ထည့်လဲရပါတယ်။
ငရုပ်သီးမှုန့် အရောင်တင်မှုန့် ဇွန်းတစ်ဝက်လောက် ၊
သံပုရာသီး တစ်ခြမ်း (သို့) ရှာလကာရည်
ကြက်သွန်မြိတ် တစ်ပင်လောက် တစ်လက်မအရွယ်လေးတွေ လှီးထားပါ။
ငရုပ်ဆီပုလင်း အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ။ မဆွိတီကတော့Sin Sin တံဆိတ် Extra Hot ကို သုံးပါတယ်။
ဒယ်အိုးထဲ ဆီ၃ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီး မီးအနေတော်ထားပါ။
ဆီကျက်ရင် ဂျင်းပါးပါးလှီးထားတာလေးတွေထည့် ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ နုတ်နုတ်စဉ်းထားတာလေးပါထည့်သတ်ပါ။ ဂျင်းနံ့မွှေးလာရင် ၀က်သားလှီးထားတာထည့် မွှေပေးပါ။ ၃-၄ မိနစ်လောက် ၀က်သား ကျက်ပြီး၊ မာလာသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
ပြီးရင် ကြက်သွန်နဲ့ ငရုပ်သီး ရောထောင်းထားထာ ထည့် အရောင်တင်မှုန့်ထည့် ၊ ၀က်သားနဲ့ လုံးပြီး ဆီသတ်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကြေရင် ကြက်သွန်လှီးထားတာထည့်ပါ။ ငရုပ်ဆီထည့်မွှေပေးပါ။ သံပုရာရည်လေး မွှေးအောင်ညှစ်ထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးကော်ရည် ထည့်မွှေပေးပါ။ ချခါနီး မြည်းကြည့်၊ ပဲငံပြာရည်အချိုရည်၊ သကြား လိုတာထပ်ထည့်ပြီး ချလို့ရပါပြီ။ ကြက်သွန်မြိတ်လေး မွှေးအောင်အုပ်ပေးပါ။
်မဆွိတီကတော့ စလုံးက ငရုပ်သီးစိမ်း အနီရောင် အရှည်တောင့် ထည့်မိလို့ ငရုပ်သီးဖတ်တွေများများမမြင်ရပဲ စပ်ပါတယ်။
ငရုပ်သီး မစပ်တာ(အပုတောင့်)ထည့်ရင်တော့ များများထည့်လို့ရပြီး ငရုပ်သီးဖတ်လေးတွေနဲ့ အမြင်ပိုလှပါတယ်။
မုန့်လုံးရေပေါ် ... by TTSweet
စမူစာကြော် ... by TTSweet
ကုလား စမူစာသုပ် ... by TTSweet
ဟောဒီက မုန့်သည် ... by TTSweet
မြန်မာစာ မြန်မာဖောက် ပြုပြင်ချင်သူများအတွက် by ဝင်...
၀က်ရိုး ကြမ်မဆိုင် ... by TTSweet
စင်္ကာပူစတိုင် ငါးခေါင်းဟင်း by TTSweet
ကော်ပြန့်ကြော် by TTSweet
ကော်ပြန့်ကြော် ကန်ဇွန်းရွက်သုတ် by TTSweet
ကြက်သားပလာတာ by TTSweet
Chicken ဆာတေး by TTSweet
ကန်ဇွန်းဟော့ပလိပ် by TTSweet
ကြက်ကာလသမီးချက် by TTSweet
မုန့်လုံးရေပေါ် အလှူ by TTSweet
ကြေးအိုးဆီချက် ၊ ကြေးအိုး ... by TTSweet
နွားနိူ့ခဲပြုလုပ်နည်းနှင့် နွားနိူ့ခဲချက် by TTSw...
ငါးထမင်းချဉ် ၊ ထမင်းဆိမ့် ... by TTSweet
ငါးဥဟင်း ... by TTSweet
ဆီသတ်ချက်တဲ့ ရယ်ဒီမိတ် မုန့်ဟင်းခါး by TTSweet
ငှက်ပျောသီးပေါင်း ... by TTSweet
ရှမ်းဟင်းထုတ် မွှေးမွှေးလေး ... by TTSweet
၀က်သားတုတ်ထိုး၊ ကြာဆံကြော် ... by TTSweet
မုန့်ဖက်ထုပ် ပူပူနွေးနွေး စားရအောင် ... by TTSweet...
မန္တလေးမုန့်တီ နန်းကြီးသုပ် စားရအောင် ... by TTSwee...
၀က်သားလုံး ချိုချဉ် ... by TTSweet
ကြွပ်တယ်၊ ရွတယ်၊ လှတယ် ... ပဲကြော် by TTSweet
၀က်သားကုန်းဘောင်ကြီးကြော် (Kung Bao Pork) by TTSw...
ကက်ဟင်းခါးသီးနှပ်ခြင်း by TTSweet
ယိုးဒယား ငါးဖယ်ကြော် ( Thai fish cake) by TTSweet...
အုန်းနိူ့ခေါက်ဆွဲ ဆိမ့်သဗျ .. by TTSweet
စင်္ကာပူ အမှတ်တရ Kway Chap by TTSweet
ခလေးတို့အကြိုက် Popcorn Chicken ...by TTSweet
Japanese Golden Curry ...by TTSweet
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ချက်နည်း နိဿရည်း ... by TTSweet
ရခိုင်မုန့်တီ (အာပူလျှာပူ ) by TTSweet
ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း ...by TTSweet
ကျူနာငါးသေတ္တာသုတ်၊ ၀က်ရိုးကြာစွယ်ဟင်းချို by TTSwe...
အုန်းထမင်း ဇာတ်လမ်း ...by TTSweet
မှိုကန်ဇွန်း အစပ်ကြော် ...by TTSweet
မနက်စာ ကောက်ညှင်းပေါင်း နဲ့ ပဲပြုတ် ... by TTSweet...
မုန့်ကြာစေ့ ...by TTSweet
ကုလားဗယာကြော် ... by TTSweet
ရှမ်းဟင်းထုတ် မွှေးမွှေးလေး ...by TTSweet
ဂျူဂျူလေး အကြိုက် Pancake by TTSweet
ထမင်းသုပ် စားမယ် ဝေ့ ...by TTSweet
2nd prototype of အုန်းနို့ကျောက်ကျော ...by TTSweet...
ငါးဆုတ်လုံးနှင့် ချက်သော မန္တလေး မုန့်တီ။ by TTSwee...
ရန်ကုန်စတိုင် ဒန်ပေါက်ချက်နည်း by TTSweet
မြီးရှည် လုပ်စားကြရအောင် ....by TTSweet
မုန့်ဦးနှောက် by TTSweet
အာလူး ကတ်တလိတ်ကြော် by TTSweet
ကြက်ဥ ပူတင်း by TTSweet
Expressing stress or anxiety by April Snow
ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ရာမှာ ချောချောမောမောနဲ့ ပြဿနာမရှိဘူး ...
ကျန်းမာရေး မကောင်းရင် သုံးဖို့အတွက်ပါ by Peter Par...
လေ့လာမိသမျှ by Peter Parker Facebook
Telephone Expressions (6) by Sayar WinNaingOo
ကျေဇူးပြုပြီး Share ဖြင့်ကူညီးပေးပါဗျာ... အင်္ဂလိပ်စ...
တယ်လီဖုန်း အင်္ဂလိပ်စကား by Acuity English Language ...
The Best Egnlsih4You Selection2by Sayar Maung ...
Telephone Expressions (6) by Sayar Win Naing Oo
ဘယ်ကစပြီး အင်္ဂလိပ်စာ စစီမလဲ
နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကား2by April Snow Facebook မှ...
လိုရင်းတိုရှင်း ၃၈ by Sayar Antony
ခပ်မာမာလေး ပြောကြည့်မယ်..by April Snow Facebook
Notebook Asus K450CC. Download drivers for Windows...
English စာလေ့လာသူများအတွက် (ဝင်းလှိုင်(နည်းပညာ) ၏ E...
အိပ်ရာဝင်ချိန် ပြောသော စကား
Telephone Expressions (4) by Sayar WinNaingOo
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင် ရှောင်အပ်သော “ ပါသုံးပါ...
The Best Egnlsih4You Selection1 by Sayar Maung M...
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ(Myanmar Net...
အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာလဲ..??? What is Internet..???
S >> S.... မှအဆက်ပါ by Vnerable Ca Kka
အခြေခံစကားပြော (၆) by Essential English-မရှိမဖြစ်အ...
အခြေခံစကားပြော (၅) by Essential English-မရှိမဖြစ်အ...
ဆရာ အန်တိုနီကို အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ချင်သူများအတွက်...
ဒီနေ့ ....Infinitive [ to] အလှည့် ရောက်လာပါပြီ.. ....
ကိစ္စတစ်ခုကို “ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ခဲ့တယ်” ဆိုတာကို ...
မြန်မာမုန့်ပဲသရေစာအမျိုးမျိုး (အင်္ဂလိပ်လို အခေါ်အဝေါ်...
Professional English in use for Marketing PDf
STAR MEMBER အပိုင်း (၁)
Telephone Expressions (2) by Sayar WinNaingOo
MACHINE PROBLEM by Savar Antony
လိုရင်းတိုရှင်း ၃၇ by Sayar Antony
Telephone Expressions (3)